Nnwom 139 NA-TWI - Onyankopɔn nyansa ne ne hwɛ - Bible Gateway
Nnwom 138Nnwom 140
Nnwom 139 Nkwa Asem (NA-TWI)
139 Awurade, woahwehwɛ me mu na woahu me. 2 Wunim biribiara a meyɛ; wuhu me nsusuwii nyinaa fi akyirikyiri. 3 Sɛ mereyɛ adwuma a, wuhu; sɛ merehome nso a, saa ara. Wunim m’ahokeka nyinaa. 4 Ansa na mebue m’ano akasa no, na wunim asɛm a mɛka. 5 Woatwa me ho ahyia. Wonam wo tumi so bɔ me ho ban.